Golaha Deegaanka Saylac oo Doortay Maayar Iyo Maayar Ku xigeen | Somaliland.Org
Golaha Deegaanka Saylac oo Doortay Maayar Iyo Maayar Ku xigeen
January 1, 2013	Saylac (Somaliland.Org)- Mudanayaasha Golaha deegaanka ee degmada Saylac ayaa maanta kalfadhigii ay yeesheen waxaa lagu dhaariyay Xildhibaanada Degmadaasi isla markaana waxaa ay ku doorteen Maayar iyo Maayar ku xigeenka Magaalada Saylac.
Kalfadhigan waxaa furay gudoomiyaha gobolka Salaal Nuur Cismaan Guuleed,waxaana ka qayb galay Weftiga uu hogaaminayay Wasiirka Wasaarada Wershadaha Mudane C.risaaq Cali Cismaan Waxaana ka soo xaadiray Toban xildhibaan oo ka mid ah Todoba iyo Tobaanka Mudane ee golaha cusub ee deegaanka degmadaaasi ka koobaan tahay waxaana mudaayaashu halkaasi ku dhaariyey gudoomiyaha maxkamada degmada lughaya oo uu u soo wakiishay gudoomiyaha maxkamada gobolka salaal.
Kadib mudanyshu waxa ay cod aqlabiyad ah ku doorteen inuu noqdo maayarka degmada Seylac Xuseen Ciidle Barkhadle, halka mayar ku xigeena ay u doorteen Sacad Daahir Cigge.
Gudoomiyaha gobolka Salal md. Nuur Cismaan Guuleed, oo hadal ka jeediyay fadhigaasi ayaa waxa uu xildhibanada golaha degaanka ee degmada Saylac kula dar daarmay inay ugu sheeqeyaan wada jir iyo wax wada qabsi bulshada degaanka wada degan isla markaan ka hawlgalaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahiyaha dhinca biyaha iyo caafimaadka ee degmada ka jira.
Kulankan lagu doortay gudoomiyaha degmada saylac waxa goob joog ka ahaa wafdiga dawlad ee uu hogaaminayo wasiirka wasaarada warshadaha md. Clrisaaq Cali Cismaan kana mid yihiin Xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamanka Somaliland kuwaas oo mudooyinkii dambe ku sugnaa gobolka salal.
Previous PostMadaxweyne Axmed Silanyo: “Waa Hoggaamiye ka midho dhalin kara Himilada Ummadda Somaliland”Next PostShil ay ku dhinteen Sadex Askari oo Boolis ah 16 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka Hargeysa	Blog